Yintoni iNtloko yeTywina?
Seal Head isetyenziselwa ukuvala isiphelo sesikhongozeli ukuze izinto zangaphakathi nangaphandle zokwahlulahlula kwimithombo yeendaba, ekwabizwa ngokuba sisigqubuthelo sokuphela, iyinxalenye yesikhongozeli kwaye iqhagamshelwe kwisilinda ngokudibanisa. Ngokweendlela ezahlukeneyo zejiyometri, inokwahlulahlulwa ibengumbuso, ...
Iziphumo zenkqubo yokunyanga ubushushu kwiipropathi zoomatshini zentsimbi
Ukunyanga ubushushu bentsimbi yinkqubo apho into yokusebenza yesinyithi ifudunyezwa kubushushu obufanelekileyo kwindawo ethile, emva koko ipholile kwizantya ezahlukileyo emva kokugcinwa kwe-BAI kolu bushushu kangangexesha elithile. iinkqubo ezibalulekileyo ...
Ungazikhetha njani izinto ezenziwa ngoomatshini?
Amalungu oomatshini abhekisa kwiyunithi esisiseko yomatshini, ezinje ngeebholithi, izikrufu, izitshixo, amagiya, ishevu, izikhonkwane zentwasahlobo, njl.njl. isetyenziswe kumatshini ohlukeneyo, iinxalenye ezizodwa ...